Buundada Opera waxaa loo xirayaa Gaadiidka Maanta 22.00:XNUMX Dayactir & Dayactir aawadood awgeed RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraOpera Bridge ee caasimadda Sababo La Xiriirinta Dayactirka, 22.00 ayaa sidoo kale la xirayaa Gaadiidka
12 / 07 / 2013 06 Ankara, GUUD, Headline, TURKEY
Opera Bridge ee caasimada (Ekrem Barlas Bridge) sababo la xiriira dayactirka dayactirka, sababtoo ah buundada TCDD Gar-Dikimewii maanta maanta 22.00'dan, 15 July Isniinta xaafada 06.00 ayaa la xirayaa.
Cimilada kulul, xiritaanka dugsiyada iyo imaanshaha fasaxa, cufnaanta gaadiidka ayaa hoos u dhacday degmada caasimadda ah ee Ankara, taasoo kor u qaadday dayactirka wadooyinka iyo dayactirka wadada, sii wadaan inay ka shaqeeyaan buundooyinka. Xaaladdan, kooxuhu waxay qaban doonaan dayactirka iyo dayactirka howl-galka Opera Bridge dhammaadka wiigga, oo kaliya tareenka TCDD Gar-Dikimevi ayaa loo xirayaa gaadiidka, wuxuu sheegay in darawallada ay ku siin karaan marinka waddooyinka kale.
Darawaliinta ka socda TCDD Gar ilaa Dikimevi, waxay u leexdaan dhinaca Cumhuriyet Avenue ilaa Cumhuriyet Avenue, raaci Istanbul Street iyo Adnan Saygun Street, darawalada ka soo jeeda TCDD Gar ilaa Sihhiye waa inay raacaan wadada hadda.
Buundada waddada Ipsala ayaa lagu xirayaa gaadiidka
Gacanka Jasiiradda Gacanka oo la xiray
Ipekiş isgoysku wuu xiran yahay gaadiidka maxaa yeelay dhismaha tareenka ee magaalada Bursa
Ankara-Istabul High Speed ​​Train 29 ayaa tagi doona Oktoobar